Hodan Naaleeye “Hogaamiyihii Bilaa Mansabka ahaa “ | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Hodan Naaleeye “Hogaamiyihii Bilaa Mansabka ahaa “
Jul 14, 2019 - 7 Aragtiyood
Laascaanod ( Kalshaale ) Muddo imminka laga joogo kun sano iyo dheeraad ayaa waxaa dhacday qiso taariikhda gashay. Boqorkii dowladdii reer banii Umaya ee la oron jiray Hishaan bin Cabdil-Malik ayaa maalin xaramka yimid, isaga oo ay hareer socdaan, ciidankiisii iyo madaxdii kale ee dowaladdu.
Boqorku waxa uu rabay in uu kacbada dawaafo, balse wuxuu la kulmay ciriiri, waxa uuna fursad u waayey dhagaxa madow. Goor boqorkii ciriiri iyo shiddo ku jiro, ayaa waxaa yimid Saynul Caabidiin. Dadkii mar kaliya ayey labo saf kala noqdeen. Jidkii waasac ayuu noqday, Saynul Caabidiin, wuxuu si fudud u dawaafay kacbadii.
Boqorkii yaxyax iyo amakaag ayaa ku dhacay. Hishaam wuxuu dhaxlay boqortooyo ay ku soo murxeen awoowgiis, aabihiis iyo waliba walaalihiis. Awoodii iyo saldanaddii karaamo ku waa. Wuxuu ku tiirsanaa awoodda qalalan, balse wuxuu ogaaday in cududda iyo carshiga kaliya aan jacaylka bulshada lagu kasban karin.
Kuwii la socday ayaa amakaag dartii is hayn waayey. War ninkani muxuu ahaa dadku ixtiraamayaan? Adigaba cidna kuma soo dhawayne? Boqorkii isaga oo is khaafinaya ayuu ku tiraabay, “ma garanayo”. Maanso yahankii waynaa ee Farasdaq ayaa ciil isla hayn waayey oo tix taariikhda gashay ugu jawaabay boqorkii. Wuxuu Farasdaq ku maansooday in ninkan uu inkirayo uusan isaga aqoonsi uga baahnayn, ee makhluuqa Ilaahay wada garanayaan, awoowgiisna yahay Nabi Muxammad CS.
Hoggaamintu sideedaba magac ma aha, kursi lagu fariistana hoggaamintu waa ka gudo wayn tahay. Waxaa jira dad aan waligood kursi ku fariisan oo bulshada saamayn ku yeeshay, is beddel muuqdana la yimid.
John C Maxwell, waa 72 sano jir maanta. 47 sano oo uu cilmiga hoggaaminta darsayey iyo 70 buug ee uu qoray, waxa uu ku soo koobay in hoggaamintu sideedaba aysan saamayn ka soo harin.
Hoggaamintu waa adeeg, in aad bulshadaada u adeegtidna kuma xirna in xil lagugu maamuuso. Haddii aad doontid waxaad waraysan kartaa qoraaga caanka ah ee Robin Sharma iyo buuggiisa, “The leader who had no title”.
Laakiin, haddii aan meel dhow kaa tuso arrinka..waxaad u fiirsataa geerida iyo noloshii Hodon Naaleeye. Hodon waxay ahayd hoggaamiye is beddel doon ah. Hooggaamiye aan xil-hayn, haddana ka saamayn badatay kuwo kursi dartiid dhiig u qubay. Hadafku waa adeegga bulshada, si aad kaalintaada uga soo dhalaashidna uma baahnid in cid gaar ahi xil kugu rarto ama heeso laguu qaado oo lagu ammaano.
Casharka kale ee aan ka baran karno geerida Hodon ayaa ah, in khatar jirta darteed aan looga dhuuman masuuliyad ku saaran. Sideedaba geeridu waa wax aan la huri doonin, balse waxaa muhiim ah in aad iswaydiisid, maxaad doonaysaa in dadku kugu xasuustaan marka aad dhimatid?.
Haddii aad hal cashar kaliya ka qaadan kartid buugga “The 7 Habits of Highly Effective People”, ee uu qoray Stephen Covey, casharkaasi wuxuu noqon karaa in aad fahamtid wixii ay fahamtay Hodon oo ah in aad jawaab u raadisid su’aasha ah maxaan u noolahay? maxayse dadku igu xasuusan doonaan marka aan dhinto?
Steve Jobs, wuxuu lahaa falsafad cajiib ah. Isaga oo dhallinyaro ah ayuu garowsaday in aan geeri la huri doonin. Wuxuuna go’aan ku gaaray in uu maalintiisa uga faa’iidaysto, sidii iyada oo ay tahay maalintii ugu danbaysay dunida. Taas ayaana sabab u ahayd in caado ka dhigto in uu subax walba muraayadda hor istaago oo naftiisa waydiiyo: Tolow haddii ay maanta ahaan lahayd maalintii iigu danbaysay dunida, ma samayn lahaa waxa aan doonayo in aan maanta sameeyo? Falsafaddan ayaana u sahashay Steve in uu raad muuqda ka tago.
Hodon Naaleeye ayaa la mid ahayd, waxay noolayd nolosheeda, waxayna u noolayd sidii ay doonaysay. Waxay ku jirtay halgan, waxayna yeelatay saamayn wayn, quluubta bulshadana waxay kaga tagtay raad wayn. Ilaahow kuu naxariiso…. Aammiin.
Qaamuus Nuur Dirir
Hodan, ninkeedii iyo intii ummad ku dhimatay oo waxgarad badan ku jireen ilaah ha u naxariisto.
Kullu nafsun daaiqatul mawd……waa lakala horeeyaa keliya.
Yaa rabi, fansurnaa calal qowmul kaafiruun.
Gabadha sharafta leh iyo intii ku dhimatay Alla how naxariisto.
War bal sheekada gabadha innaga xira. Waala oofsaday halkii ay xaqqa u laheyd ayaa loo kaxeystay.
Wexey aheyd qof caadiya baraha bulshada la yiqiin inkastoo anigu aanan garaneyn.
Waxaan maalin qura weynay.
Professor cadoow. Dr shahiid. Iyo drs qamar.
Waxaan daqiiqad weynay 500 boqol oo ruux.
Ma jiro qof aduunka ku waraayo ee ilaahey towfiiqda hanna waafajiyo.
ilaahay how naxariisto iyada iyo inti ladhimatay
maalma la wadwadaya beriba waa layska ilaabidona
umadani way kadaashay dhib iyo xansuuq maalin walba jooga
ilaahay ferej khaysqaba hanoofuro isaga awoodleh e WBT
Hodan alaha u naxariisto: Maalin la waydiiyey sababta parnamijkeeda iyo safaradeeda tirada badan maxa u jeedadadiisa tahay?
Waxay tiri Somalia ayaan aad u jeclahay, waxaa ogahay in dal qurux badan yahay oo waxwalba haysta iyo Somalida dad waxqabsankara yihiin..
Ujeedadayda koowaan waa in: Waa in Somalida proud ku noqdaan dalkooda, diintooda iyo dhaqakooda weliba caruurta qurbaha ku dhashay, dalkooda aqoon.
Waxaan kale rabaa in dadka Somalida horumarka gaartay all over the world iclaamiyo waxa qabsadeen sida loogu daydo….
Ujeedadayda waa in waxa fiican soo qaado, dadka inspirations gelinaya….great woman.
HORTA YAA NA QARXIYA,DILA?
FIIRI QAACIIDADAAN HOOSE:
IS=ISRAEL SECRET (EREY BIXIN CUSUB OO ISIS AY U BIXIYEEN KA DIB MARKII LALA FAHMAY WAXA LOOSOO GAABIYEY XURUUFTA I.S.I.S.)KKKK
Allow u naxariiso Hodon Naaleeye..
..runtii waxay hayd qof naadir ku ah Soomaalida…sababta aan saas u leeyahay waa…waxay lahayd sifooyin badan oo qofka bulshada anfaca u leh lagu garto;
Hal abuur toosan
Dad isku wad
Ka hormarin danta guud mida gaarka ah..
Iyo wanaag kale oo badan…allaha weyni ajar iyo xasanaad ha ka siiyo…
Waa sifooyinka lagu garto…hoggaamiyaha dabiiciga ah…waa sifooyinka lagu garto hoggaaliyaha horusocodka…hoggaamiyaha isbedeldoonka ah….hoggaamiyaha mideeyaha ah….hoggaamiyaha kuwa tamarta u dooda oo dhiiriya…..
Waa yaab…geyiga soomaaliyeed waxaad mooddaa meel aan qofka waxrarka ahi ku noolaan karin….
Waxaad moodda geyi qofka xuni ku baraaro, qofka wacanina uu ku aakhiraysto….waa sifooyinka waddamada aan dhinka ka soo kabsan…waayo qofkii wax qaban lahaa ama isbedel keeni lahaa aakhiraa loo dirayaa….
Waxaa jira saxaaraha inaanay geedaha anfaca lihi ka bixin, laakiin uu ka baxo oo ku tanaado keliya geed qodxo badan oo dhib mooyee aan dheef noolaha u lahayn…sidaas ayaa geyigeenii maanta u egyahay…alloow sahal…
Waxaan ku soo koobayaa waxay ahayd hoggaamiye dabiiciya oo horusocod ah…a natural progressive leader…
Waxay ahayd hoggaamiye aan danayste ahayn…oo danta guud u adeega…waxay ahayd hoggaamiye hal abuur iyo aragti fog leh kuwa nugulna u qareema…u fiirso…halku dhiggeedii:
“Naag iska dhig” oo ay ku dhiirigelinaysay gabdhaha Soomaliyeed inay dhexda xirtaan…waxbartaan…shaqaystaa…mustaqbalkooda dhistaan…cidna aanay mustaqbalkooda u daba fariisan….”You are the captain of your life”…
Hal ku dhiggii ay gabdhaha Soomaaliyeed uga tagtay:
“Naag iska dhig”
Mar la weydiiyey waxay ula jeedo…
Waxay tiri hooyaday gabdho badan ayey dhashay markay hawsha guriga nagu dhiirigelinayso ayey nagu oran jirtay “Naag iska dhig”…
Waxay tiri anigu waxaan hooyaday oraahdeedaas u fasirtay: naag iska dhig…dhexda xiro…waxbaro…isdhis…shaqayso…dadaal….waxay ku tusaysaa sida maskaxdeedu u saraysay…wayna ka dhabaysay….
Gabdhaha waxay uga tagtay:
You are master of your life